TAARIIKH NOLOLEEDKII MARXUUN XASAN MAXAMED CUMAR LOOSHADE | Toggaherer's Weblog
Waxaan marka hore tacsi u dirayaa reer Maxamed Cumar Looshade, geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Saaxiibkay/Walaalkay Marxuum Xassan Looshade, INAA LILAAH WA INA ILAAHU RAAJUCUUN. Ma Dhinte waa ILLAAH. Eebbahay waxaan marxuumka u weydiin naxariis, denbi dhaaf iyo inuu ka waraabsho Jana’tul Fardawza. Inakana Samir iyo Iimaan buuxa inaka siiyo, amiin.
Marxuum Xassan Looshade “AUN” wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u furfuran, umada oo dhamina jeceshahay isagoo ahaa ilaa xad aan la malayn karin nin Bulshaawi oo ay cid walba is fahmaan, dadkoo dhamina jeclaysan karaan.
Wuxuu marxuumku ka dhashay qoys reer magaala ah, ahaana dadkii deegaan ahaan ugu horeeyey magaalada ceerigaabo, sidaa darteed wuxuu marxuumku ka dhigtay waxbarasha iskuulka degmada Ceerigaabo, Dayaxa, Burco ee gobolada waqooyiga Soomalia.
Marxuumku wuxuu ahaa Cayaaryahan heer Qaran soo gaadhay, isagoo ka qayb galay Ciyaarihii Gobolada Soomaliyeed ee sanadihii 1980 – 1982, isagoo ahaa cayaar yahan kubada Koloyga, Cagta iyo Fooli Ballsha intaba. Wuxuu Sanadihii 1982 ka qayb galay kuna biiray naadigii Horseed oo uu tababar la samaynayey , naadigaas oo ka mid ahaa kuwa ugu cad cadaa kooxahii dalka ka jiray xiligaa.
Sababo tacliin sare raadsasho ah, ayaa marxuumku uga tegey wadanka uguna tacabiray qurbe, badhtamahii sanadkii 1983, halkaasoo ku biiray Univeristy of Poona, India, kana qalin jebiyey 1987 isagoo qaatay Bachelor of Science “Chemistry”. Xiligaa ardaynimada, Marxuumku wuxuu ahaa Hormuud/Leader ka dhex muuqda ardayda Soomaaliyeed ee kun ku dhowaadka ahayd ee xiligaa ku sugnaa Poona.
Marxuumku xiligaa wax barashada isku jabadin baanu degenayn, boqolaal waa’ guduud baana noo wada beryey soo jeed iyo wax akhris adag oon hurdo la’ahayn, isagoo ahaa nin dadaal iyo karti badan oon DAAL IYO ILDUUF midkoona lahayn, anagoo haasaawe iyo tiigsasho kaga soo baxnay waqti aan sahlanayn.
Wuxuu noqday hormuudka amaba Captain ka kooxda KUBADDA CAGTA ee ardayda Soomaaliyeed, iyadoo xiligaa kooxdaasi ahayd mid reebtay taariikh iyo mahadho India laga wada xusuusto, hantiyeyna horyaalo fara badan, ilaa ay gaadhay in sumcada ardaya Soomaliyeed meel heer sare ah. Marxuumku hormuud iyo laf dhabar buu ka ahaa.
Marxuumku wuxuu ku soo noqday wadanka hooyo dhamaadkii 1987, halkaas oo ku biiray mashaariicdii Wasaarada Beeraha ee ay wadeen haya’ada caalamiga ah, halkaas oo khibrad badan iyo tababaro kale ka sii qaatay. Wuxuu Marxuumku ka shaqaynayey mashaariicda tijaabada ah ee Afgooye, halkaas oon shaqsi ahaan ku booqday July 1989, mar aan fasax ku tegey wadanka oon aan marxuumka iyo walaalihiis ku degay Xamar.
Wixii burburka ka danbeeyay, Marxuumku wuxuu ku soo noqday mandaqada isagoo ka shaqeeyaay mashaariic fara badan iyo Hay’ado sama fal sida DANDOR, SADRO , CARE iwm.
Badhtamihii sanadkii hore ayaa Marxuumku u wareegey Hargeysa, isagoo ka mid noqday Hay’ada Doorashooyinka Somaliland, halkaas uu ka gaadhay heer Gudoomiyaha Diiwaangelinta oo asbuucii hore loo magcaabay. Wuxuu marxuumku ku jiray International Observer kii loo diray Doorashadii buuqa badnaa ee Kenya kal hore ka Dhacay.
ALLAH Ha u naxariistee wuxuu marxuum ku ahaa nin shaqo badan, is raaciya hawsha uu gacanta ku hayo markaas oo daacad u ah, jecel in wax kasta oo uu qabtaa ku dhamaadaan sida HORYAALKA LA BILLO marka koox badiso. Xidig la tebi doono ayuu ahaa Marxuumku.
ALLAH HA U Naxariistee Xassan Looshade wuxuu ahaa Saaxiib qaaliya oon tebi doono aniga iyo in badani, bulshaawi ah, aan laga qaloon, waxaan markaa EEBAHAY U weydiinayaa Naxariis iyo Janno, dhamaanteena SAMIR IYO IIMAAN INAKA SIIYO.
W/Q Faisal Xawar
oo Ay Saxiib dhaw ahaayeen Marxruunka